Isamkelo emva kweMpembelelo yezakhelo: Ezona nkqubo zingcono zokukhutshelwa | Abadali be-Intanethi
Ukuhlelwa kwevidiyo kunye nokudityaniswa, kubandakanywa oopopayi, kube yinxalenye ebaluleke kakhulu yoyilo lwegraphic. Yonke imihla kukho abaqulunqi abakhetha eli candelo kwaye kuqhelekile, kuba sonke siye sathanda ukubona ifilimu yesayensi egcwele imiphumo ekhethekileyo.
Kodwa ngeli xesha asizanga ukuthetha nawe malunga ne-cinema, iimuvi okanye iziphumo ezikhethekileyo, kodwa malunga ne-After Effects kunye neetemplates zayo. Ukuba uqhelene nale nkqubo, uya kwazi ukuba kukho iitemplates apho unokuyisebenzisa ukuhlela iividiyo zakho.
Ewe, Kule posi siza kukubonisa ezinye zezona zicelo zibalaseleyo okanye iiwebhusayithi apho unokuzifumana khona., kwaye ukuba awukayazi ngokupheleleyo le nkqubo, siya kuchaza ngezantsi ukuba yintoni na, yeyiphi imisebenzi enayo kunye neziphi iimpawu eziphambili ezenza umdla.
1 Yintoni emva kweZiphumo
1.1 Iimpawu eziphambili
1.1.2 Emva kweempembelelo kunye nePremier Pro
2 Iinkqubo ezilungileyo zokukhuphela iitemplates
2.1 Isitokhwe seRocket
2.2 Iprojekthi AE
2.4 Iitemplate ezi-99
2.5 Iitemplate zasimahla zeAE
3 Ezinye iinkqubo ezifanayo
3.1 Umhleli wevidiyo yeFilmora
3.3 I-Apple Motion
3.4 Isoda yokubhaka
Yintoni emva kweZiphumo
Ukuba bekufuneka sishwankathele ngokufutshane kwaye siqonde ngokusemandleni ukuba le nkqubo ingantoni na, Sinokuthi emva kweeMpembelelo yisoftware eyinxalenye yoluhlu olubanzi lwezicelo ezenziwe nguAdobe. Eyona njongo yayo iphambili kukuveliswa kwemifanekiso eshukumayo efana nevidiyo, ngale ndlela sinokuthi siphile okanye sidlale nge-dimensionality-ntathu kwiindawo, ngenxa yezixhobo ezininzi ezikhoyo.
Asikayibizi okwangoku, kodwa ukuze uqonde ngcono, isoftwe eyigcina isebenza Iyinxalenye yodidi lwemizobo eshukumayo. Ligama elibhekisa kuzo zonke izicelo eziyinxalenye yehlabathi okanye icandelo le-audiovisual. Ngale ndlela sinokwenza kwiifilimu ezineempembelelo ezizodwa, kwiindawo zentengiso. Unayo yonke into ejikeleze icandelo le-audiovisual ezandleni zakho ngesi sixhobo.
Emva kweziphumo kuthathwa njengenkqubo egqwesileyo kunye inketho yokuqala ngaphandle kwamathandabuzo kuyo yonke imarike. Oku kungenxa yokuba igcina ujongano lwayo kunye nezixhobo eziyenza ibe yinkqubo enomdla kakhulu.
Emva kweempembelelo kunye nePremier Pro
Ngokuqhelekileyo inxulumene nezinye iinkqubo ze-Adobe ezifana ne-Premiere Pro. Umahluko kukuba i-Premiere yenzelwe abo bantu baqala ukuqala kwihlabathi le-animation yevidiyo kunye ne-After Effects igcina ubunzima obuphezulu, okwenza kube yinkqubo yeengcali.
Ezinye izinto ezizahlulayo nazo ziyimisebenzi, ngelixa i-Premiere inokwenza i-video montages. Emva kweempembelelo zijolise ngakumbi kwiziphumo ezizodwa kunye nehlabathi lenzululwazi yentsomi.
Ngokungathandabuzekiyo, ezinye iimpawu zale nkqubo kukuba inothotho lweeplagi, eziququzelela umsebenzi ukuba ungumfundi oqalayo kweli candelo, kuba ungafumana iincwadi ezininzi ezineempembelelo esele zenziwe.
Okokugqibela, kufuneka kuqatshelwe ukuba le nkqubo isebenza kunye nesoftware ethathwa njengenye yesoftware enamandla kwimarike, ngaloo ndlela iyenza kwenye yeenkqubo ezilungileyo zokwenza oopopayi.
Iinkqubo ezilungileyo zokukhuphela iitemplates
I-Rocket Stock ifana nebhanki yomfanekiso kodwa ineetemplates. Phakathi kwezinye iitemplates ezininzi, kukwakho neetemplates ezifumanekayo emva kweEffects. Yintoni ebonakalisa esi sixhobo ngumgangatho onikezelayo kuwo ngamnye kubo, Ukubonelela ngothotho lweetemplates ezinokubonelela ngochuku olungakumbi kwiividiyo zakho.
Umahluko kukuba azikhululeki kodwa wakuba uzithenge unokuzisebenzisa kulo naluphi na uhlobo lweprojekthi. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba ujonge iitemplates zeAfter Effects, olu lukhetho oluhle.
Esi sixhobo sesinye sezininzi ezikhoyo zokukhuphela iitemplates zeAfter Effects. Sisixhobo esilula ukusisebenzisa, kuba ukubhaliswa kweprimiyamu akufuneki. Ukongeza, unokuntywila kwiindidi zayo ezininzi ezifumanekayo, nto leyo eyenza ukuba ibe nomdla ngakumbi.
Kwakhona, ungayifumana iitemplates ezihambelana ngokugqibeleleyo neprojekthi yakho nganye. Kwakhona ngaphandle kwamathandabuzo lolona khetho lufanelekileyo ukuqala ukuhlela iividiyo zakho kwaye uziguqule zibe ziividiyo zobuchwephesha kunye nezobuchule. Kwakhona, abaninzi kubo bakhululekile. Yintoni enokuba ngcono?
I-Shareae sisixhobo se-intanethi se-After Effects apho, ukongeza kwezinye iinketho, inokukwazi ukukhuphela iitemplates. Umahluko phakathi kwesi sixhobo kunye neyokuqala kukuba nge-Shareae kufuneka ubhalise ukuze uqalise ukukhangela kwakho kwiitemplates. Ikwanethuba lokukhuphela zombini iitemplate zasimahla kunye neprimiyamu.
Ngaphandle kwamathandabuzo lolona khetho lulungileyo ukuba ujonge iitemplates okanye ezinye izixhobo ezinomdla ezinokuba nomdla kuyilo lwakho lwasemva kweeMpembelelo. Akuzange ngaphambili kube lula kangaka ukufumana olu hlobo lweetemplates kwaye ngaphandle kweendleko.
Lelinye lamaphepha abonelela ngoluhlu olubanzi lweetemplates zeAfter Effects. Ukongeza, nganye kwezi templates zihleleke ngokupheleleyo, nto leyo iququzelela kakhulu indlela yokusebenza ngexesha elichanekileyo lokuhlela. Olunye uphawu kukuba isixhobo ngasinye esiqulathwe leli phepha, ayibotshelelwanga kulo naluphi na uhlobo lwemvume okanye ilayisenisi, eyenza kube lula ukuyisebenzisa ngaphandle kwezinye izicelo.
I-drawback kuphela kukuba uya kufuna umguquleli ukuze akwazi ukuguqulela iphepha, ekubeni lifike ngokupheleleyo ngesiNgesi. Ngaphandle koko, sisixhobo esihle kakhulu esinokusetyenziselwa iinjongo ezininzi.
Iitemplate zasimahla zeAE
Ukuba bekufuneka sishwankathele iphepha apho unokukhuphela iitemplates zasimahla okanye zeprimiyamu emva kweeMpembelelo kwaye ezinoluhlu olubanzi lwamathuba kunye neziphumo ezikhethekileyo, ngokungathandabuzekiyo besiya kuba sithetha ngeetemplate ze-AE zasimahla. Eli phepha likhethekileyo linothotho lweziphumo apho unokufumana iziphumo eziqhumayo okanye oopopayi. Sisixhobo esifanelekileyo ukuba ujonge indibaniselwano yeentsomi kunye nefantasy.
Ngokungathandabuzekiyo sisixhobo esilungileyo ukuqala ukuyila kunye nokuyila iividiyo zakho ngendlela yobuchwephesha kunye neyomntu. Ngaphandle kwamathandabuzo lukhetho olugqibeleleyo.
Ezinye iinkqubo ezifanayo
Umhleli wevidiyo yeFilmora
Ukuba bekufuneka sikhethe phakathi kwezinye izinto ezininzi onokukhetha kuzo endaweni ye-After Effects, ngokungathandabuzekiyo iya kuba yiFilmora. Yeyona ndlela ibalaseleyo ekhoyo kuzo zombini iMac kunye neWindows. Ngayo, uya kuba nakho ukuqalisa ukwenza iziqeshana zakho zokuqala kunye nolandelelwano lweevidiyo zakho. Ukongezelela, inoluhlu lwemiphumo yamahhala kunye nehlawulwayo. Iziphumo zinokuba noopopayi okanye ungafumana ezinye iindlela ezifana nezihluzo zomfanekiso. Ngaphandle kwamathandabuzo lolona khetho lugqibeleleyo lokuqalisa.
Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeendlela ezizezinye zokutshintsha iinkqubo ezinje nge-After Effects. kunye noNuke Ukwanakho ukwenza iimontages zevidiyo ezibalaseleyo. Le nkqubo sele isetyenzisiwe kwiiprojekthi zefilimu ezisebenzayo ezifana nezinye zeefilimu ezingcono kakhulu, kuquka i-Avatar.
Abaqulunqi abaninzi sele besebenzisa esi sixhobo ukwenza oopopayi ababalaseleyo, kwaye inojongano olubanzi. I-drawback kuphela kukuba ifuna umgangatho ophezulu, kuba ithathwa njengeprogram efanelekileyo kwiingcali zoopopayi. Ngaphandle kwamathandabuzo, lolona khetho lubalaseleyo ukuba sele uyingcaphephe kweli hlabathi.
Umthombo: Inkxaso ye-Apple
I-Apple Motion yenye yeenkqubo zeengcali zika-Apple zokuhlanganisa kunye nokwenza oopopayi bevidiyo. Unokwenza oopopayi abakhulu beMac kwaye unokuzidibanisa ne-2D kunye ne-3D yoopopayi. Phakathi kweempawu zayo ezimangalisayo, kufuneka kuqatshelwe ukuba inothotho lweegraphics ezinomgangatho ophezulu wokusebenza, inezinye iinketho apho unokwenza ngokwezifiso ukukhanya, ithowuni okanye ukugcwala. Sisixhobo esifanelekileyo kubathandi be-Apple abafuna ukuphuculwa ukuhlela iividiyo zabo.
I-Natron, ngokungafaniyo nesixhobo sangaphambili, luhlelo lwevidiyo kunye nenkqubo yokudala oopopayi ekwafumaneka kwiinkqubo zokusebenza ezifana neWindows kunye neMac.
Yinkqubo efanelekileyo ukuba ungumyili wemizobo, kuba inothotho lwemisebenzi onokuthi uyenze ngokuthanda kwakho.. Yintoni ebonakalisa le nkqubo kakhulu ngumhleli wayo, Inomhleli ogqwesileyo kunye noluhlu olubanzi lwezinto ongakhetha kuzo. Kananjalo ine-2D tracker ekuvumela ukuba udlale phakathi kwezinye iinketho ezininzi.
Ngokuqinisekileyo lukhetho olugqibeleleyo.
Emva kweeMpembelelo kukusukelana nenye yezona nkqubo zibalaseleyo zokugqwesa ukwenza uphila kunye nokwenza iividiyo ezineziphumo ezintle. Ukongeza, ayisiyiyo loo nto kuphela, ikwanethuba lokukhangela phakathi kwezixhobo zayo ezininzi. Ukuba ubungayazi ngokupheleleyo le nkqubo, siyathemba ukuba ufunde okungakumbi ngayo. Sikwanethemba lokuba izibonelelo esizicebisile ziya kuba luncedo olukhulu kuwe kwaye uya kuba yingcali kwicandelo le-audiovisual. Ngoku ixesha lifikile lokuba uye kwi-adventure kwaye uyizame.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Izakhelo Zeempembelelo zasimahla